CeleTrend - Page2of 40 - News&Entertainment
December 20, 2019 Celebrity 0
လီဗာပူးလ်အသင်းကတော့ ဆဲလ်ဘတ်အသင်းရဲ့ တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမား မီနာမီနိုကို ပေါင် ၇.၂၅ သန်းနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမားဟာ ဒီရာသီမှာ ဆဲလ်ဘတ်အသင်းတွက် ‌ခြေစွမ်းကောင်းတွေ ပြသထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ မီနာမီနိုဟာ ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း ‌ခြေစွမ်းကောင်းတြွေပသထားပြီး သွင်းဂိုး ၅ ဂိုးထိ တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သတ်နေပါတယ်။ […]
လူသားလား ..?? ဂြိုလ်သားလား..??… ရိုလ်နာဒို
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆမ့်ဒိုးရီးယားနဲ့ ဂျူဗင်တပ်တို့ပွဲစဉ်မှာတော့ ဂျူဗင်တပ်အသင်းက ၁-၂ နဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ရလာဒ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲမှာတော့ ဂျူဗင်တပ်အတွက်ဂိုးတွေကိုတော့ ဒိုင်ဘားလားနဲ့ ရိုလ်နာဒိုတို့က သွင်းယူပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ရိုလ်နာဒိုဟာ အဆိုပါပွဲမှာတော့ ပွဲချိန် 45 မိနစ်မှာ ဆန်းဒရို့မတင်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကို 2.56 မီတာအထိအမြင့်ခုန်ပြီး ခေါင်းတိုက်သွင်းယူခဲ့တာ […]
နောက်ဆုံး ၁၀ နှစ်အတွင်း သွင်းဂိုးနဲ့ ဂိုးဖန်တီးမှုမှာ ပြိုင်ဘက်တွေထက် အပြတ်သာနေတဲ့ လီယွန်နယ်မက်ဆီ
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်လွန်ကာလတွေအတွင်းမှာ ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူးမက်ဆီဟာ ဘယ်ကစားသမားထက် မဆို လိဂ်သွင်းဂိုး နဲ့ ဂိုးဖန်တီးမှုအပိုင်းမှာ အသာ စီးရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မန်စီးတီးနဲ့ ပီအက်စ်ဂျီတို့ရဲ့ အင်အားကြီးထွားလာမှု၊ ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေမှာ စပိန်ကလပ်တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကျဆင်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာ ကစားသမားလွှမ်းမိုးမှုအပိုင်းတွေမှာ မက်ဆီက အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာအတွက် လိဂ်ဂိုးပေါင်း […]
အသင်းရဲ့စီနီယာကစားသမားကြီး ၂ ဦးကို လက်လွှတ်‌ရတော့မယ် မန်ယူ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အသင်းခေါင်းဆောင် အက်ရှ်‌လေယန်းဟာ လာမယ့် ၂၀၂၀ နွေကျရင် အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းဘက်ကလည်း အသက်ရွယ်ရလာတဲ့ အက်ရ်ှလေယန်းကို လက်ရှိချိန်ထိ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ ကမ်းလှမ်းထားတာ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ယန်းတယောက် နွေရာသီပြီးရင် အိုးထရက်ဖို့ကနေ စွန့်ခွာသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ အက်ရ်ှလေယန်းဟာ သူရဲ့နေရာအတွက် အသစ်ခေါ်ယူထားခဲ့ […]
ပည်ပကို ထွက်ရောက်ကစားဖွယ်ရှိနေတဲ့ မြန်မာ့ဆီးဂိမ်းသူရဲကောင်းလေး
မြန်မာယူ ၂၂ အသင်းအတွက် ဆီးဂိမ်းမှာ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူးအောင်ကောင်းမာန်ကို မလေးရှားနဲ့ ထိုင်းကလပ်တွေက ဆက်သွယ်မှုတွေရှိတယ်လို့ ကစားသမားရဲ့ ပြောဆိုမှုအရသိရပါတယ်။ The Myanmar Time နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့မှုမှာ အောင်ကောင်းမာန်က ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း ပြည်ပထွက်ကစားချင်တယ်လို့ ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ ဆီးဂိမ်းမှာ မြန်မာအသင်းအတွက် ငါးဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးနောက် ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ […]
ရင်ဆိုင်ရအခက်ခဲဆုံးပြိုင်ဘက်အဖြစ် ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူကို အံ့အားဖွယ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ယာယာတိုရေး
ယာယာတိုရေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ဘောလုံးပရိတ် သတ်တွေ ပြေးမြင်မိတာက မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ကကွင်းလယ်မာစတာတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ အသေချာပါဘဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ သူက တစ်ချိန်က မန်စီးတီးရဲ့အသင်းမှာ အရေးပါလွန်းတဲ့ ကွင်းလယ်သမား တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ မန်စီးတီးအသင်းမှာ ‌ခြေစွမ်းကောင်းတြွေပသပြီး တောက်ပခဲ့သလို အသင်းနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကိုလည်း ၃ ကြိမ်ထိ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ […]
မက်ဆီနေရာကို အစားထိုးနိုင်ဖို့ ကစားသမားတစ်ဦးသာရှိတယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ရီဗယ်လ်ဒို
December 19, 2019 Celebrity 0
ဘာစီလိုနာနဲ့ ဘရာဇီးအသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှုးကြီး ရီဗယ်ဒိုကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ အသက်ရွယ်ရလာပြီဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှုး မက်ဆီရဲ့ နေရာအတွက် အစားထိုးနိုင်ဖို့ ကစားသမား တစ်ဦးသာ ရှိတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါကစားသမားကတော့ အသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်း နေမာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် မက်ဆီဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် အကောင်းဆုံး‌ခြေစွမ်းပြကစားနေပေမယ့်လည်း […]
ဥရောပအသင်းကြီးတွေကို မျက်စိမကျကျအောင် မြူဆွယ်နေတဲ့ ဂျော်ဒန်ဆန်ချို
December 18, 2019 Celebrity 0
‌မနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့ ဒေါ့မွန်အသင်းနဲ့ လိုက်ဇစ်အသင်းတို့ပွဲစဉ်မှာတော့ တဖက်ကို ၃ဂိုးစီနဲ့ သရေရလာဒ်နဲ့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစဉ်မှာတော့ ဒေါ့မွန်အသင်းရဲ့ လူငယ်တောင်ပံကစားသမား ဂျော်ဒန်ဆန်ချိုက အသင်းအတွက် သွင်းဂိုးတစ်ဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့သလို ဂိုးဖန်တီးမှု တစ်ကြိမ်လည်း ပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆန်ချိုဟာ အသင်းအတွက် ၇ပွဲဆက်တိုက် ဂိုးသွင်းယူနိုင်သူလည်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ဆန်ချိုဟာ […]
ယူနိုက်တက်မှာ မြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေတဲ့ ဆဲလ်ဘတ်အသင်းရဲ့ ဂိုးသွင်းစက်
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ တိုက်စစ်ကို အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ လက်ရှိနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဆဲလ်ဘတ်လူငယ်တိုက်စစ်မှူးဟာလန်းကို ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ လက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေအရ ဟာလန်းကို ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ပေါင် ၇၆ သန်း‌နဲ့ခေါ်ယူဖို့ နီးစပ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ ခေါ်ယူဖြစ်ခဲ့ပါကလည်း ဇန်န၀ါရီလအတွင်းမှာ ခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီး သူရဲ့အသင်းဟောင်းမှာ ပြန်လည်အငှားချရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်‌တွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်နည်းပြဆိုးလ်ရှားကိုယ်တိုင်ကလည်း နောက်လအတွင်းမှာ ဟာလန်းကို […]
“ပျိုမေတို့ရဲ့ အသည်းကျော် Project K အဖွဲ့ရဲ့ ပထမဆုံးရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ”
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်က အောင်မြင်ဆုံးလို့ပြောရမယ့် ယောကျာ်းလေး Dancer အဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ Project K အဖွဲ့ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ တစ်ဖွဲ့လုံးကို မြင်တွေ့ရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ Boy Band အဖွဲ့အဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ Project Kအဖွဲ့ကတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံက K – Pop Idol […]